OnePlus ရဲ့ 5G ဖုန်းက OnePlus7မဟုတ်တဲ့ Brand အသစ်ဖြစ်လာနိုင်မလား?
12 Nov 2018 . 3:27 PM
OnePlus ကနေ လက်ရှိအချိန်မှာ OnePlus 6T စမတ်ဖုန်းကို ပြီးခဲ့တဲအောက်တိုဘာလတုန်းက မိတ်ဆက်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် OnePlus ကနေ အဆိုပါ OnePlus 6T မိတ်ဆက်ပေးတုန်းက နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုပါ မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒါကတော့ OnePlus ကနေ လာမယ့်နှစ် ၂၀၁၉ မှာ OnePlus ကနေ 5G ကို Support ပြုလုပ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကို မိတ်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် လူတွေအကုန်လုံးနီးပါးက OnePlus7စမတ်ဖုန်းက ပထမဆုံး 5G ကို Support ပြုလုပ်တဲ့ OnePlus ဖုန်းဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ OnePlus ကနေ အခု 5G ကို Support ပြုလုပ်လာမယ့် စမတ်ဖုန်းက OnePlus7မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် နောက်နှစ်မှာထွက်လာမယ့် OnePlus7နဲ့ 7T စမတ်ဖုန်း ၂ မျိုးစလုံးက ဈေးသက်သာတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေပဲဖြစ်လာဦးမယ့်ပုံပါပဲ။
အဲ့ဒီအတွက် OnePlus ရဲ့ 5G စမတ်ဖုန်းက ဘယ်လိုမျိုးဖုန်းဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာက OnePlus ကနေ 5G ကို Support ပြုလုပ်တဲ့ဖုန်းက လုံးဝ Branding အသစ်နဲ့ Design အသစ်ကိုသုံးပြီးထုတ်လာဖို့ များနေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် OnePlus ရဲ့ 5G စမတ်ဖုန်းက လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ ထုတ်ပြမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက် အခု OnePlus Series ဖုန်းသစ်ကို မြင်ရတော့မှာပါ။
OnePlus ကနေ လကျရှိအခြိနျမှာ OnePlus 6T စမတျဖုနျးကို ပွီးခဲ့တဲအောကျတိုဘာလတုနျးက မိတျဆကျပေးထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ OnePlus ကနေ အဆိုပါ OnePlus 6T မိတျဆကျပေးတုနျးက နောကျထပျသတငျးတဈခုကိုပါ မိတျဆကျခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒါကတော့ OnePlus ကနေ လာမယျ့နှဈ ၂၀၁၉ မှာ OnePlus ကနေ 5G ကို Support ပွုလုပျတဲ့ စမတျဖုနျးတဈခုကို မိတျဆကျသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ လူတှအေကုနျလုံးနီးပါးက OnePlus7စမတျဖုနျးက ပထမဆုံး 5G ကို Support ပွုလုပျတဲ့ OnePlus ဖုနျးဖွဈလာမယျလို့ ယူဆထားကွတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ OnePlus ကနေ အခု 5G ကို Support ပွုလုပျလာမယျ့ စမတျဖုနျးက OnePlus7မဟုတျဘူးလို့ ပွောကွားခဲ့ပွနျပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ နောကျနှဈမှာထှကျလာမယျ့ OnePlus7နဲ့ 7T စမတျဖုနျး ၂ မြိုးစလုံးက စြေးသကျသာတဲ့ စမတျဖုနျးတှပေဲဖွဈလာဦးမယျ့ပုံပါပဲ။
အဲ့ဒီအတှကျ OnePlus ရဲ့ 5G စမတျဖုနျးက ဘယျလိုမြိုးဖုနျးဖွဈလာမလဲဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးနပေါတယျ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ ဖွဈနိုငျတာက OnePlus ကနေ 5G ကို Support ပွုလုပျတဲ့ဖုနျးက လုံးဝ Branding အသဈနဲ့ Design အသဈကိုသုံးပွီးထုတျလာဖို့ မြားနပေါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ OnePlus ရဲ့ 5G စမတျဖုနျးက လာမယျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈအစောပိုငျးမှာ ထုတျပွမယျလို့ ပွောကွားခဲ့တဲ့အတှကျ အခု OnePlus Series ဖုနျးသဈကို မွငျရတော့မှာပါ။